About KAIGUAN | IChangzhou Kaiguan Packaging Technology Co, Ltd.
Changzhou Kaiguan Okufakiwe & Technology Co., Ltd.
Umakhi womkhiqizo we-KAIGUAN-Packaging
Iminyaka engu-12 yokuhlangenwe nakho embonini yokupakisha yemvelo
Sisebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukile emhlabeni, sisebenzisa izinto zokuvikela imvelo, sakha ubuchwepheshe bokukhiqiza bemikhiqizo emisha yokupakisha imvelo.
Imikhiqizo yethu emikhulu yokupakisha iyi-cheertainer (isikhwama esime mpo ebhokisini), i-ldpe cubitainer, isitsha samanzi esigoqekayo, i-jerry semi-folding can nemishini yokugcwalisa.
Njengomkhiqizo wethu omusha wokupakisha, isikhwama se-cheertainer senziwe ngepulasitiki ye-multilayer. Isendlalelo sangaphandle (i-polyamide + polyethylene) sivikela umoya-mpilo nomswakama; ukuminyana kwayo nokwakheka kwayo kungahluka kuye ngezidingo zeklayenti noma umkhiqizo. Isendlalelo sangaphakathi (i-polyethylene) sinwebeka futhi siyamelana nokudabuka. Kuyindlela ehlukile yokufaka iphakethe ekufakweni kwendabuko ketshezi, enikeza izinzuzo zesitsha esiqinile nokuqina okuguqukayo mayelana nezidingo zokuhamba nokugcina. Izonga kuze kufike ku-80-90% kumthamo wokugcina impahla kanye nokwehliswa okufanayo ezindlekweni zokuhamba zangaphakathi nokonga ukukhishwa kwe-CO2.
Ibhokisi lenzelwe ngokwezifiso. Njengoba yenziwe ngamakhadibhodi, zonke izinhlangothi zingaphrintwa, okunikeza indawo enkulu yokuxhumana.
Inkampani yethu inokulawula okuqinile kuzo zonke izixhumanisi zekhwalithi yomkhiqizo kusukela ekuqaleni. siphishekela ubudlelwano besikhathi eside futhi obuzinzile bokusebenzisana namakhasimende, sinikele ngemizamo yokwenza inkampani ithuthuke isikhathi eside.
Ngesimo esivulekile futhi esiqotho, sibheke phambili bonke abangani ukuthi babe nokuxhumana nokuphenya enkampanini yethu, banikeze imininingwane abayidingayo futhi babasize ukuxazulula izinkinga zokuklama.
Sithemba ukusungula ukubambisana kwesikhathi eside nabo bonke abasebenzisi ngekusasa elihle！
Khetha uKaiguan, khetha ikhwalithi!
UKaiguan-ubambe iqhaza ngempumelelo embukisweni!
Okushiwo amakhasimende ethu？
Isidingo seKhasimende nokusikisela kungamandla ethu okushayela, ukwaneliseka kwamakhasimende ukuphishekela kwethu.
Manje sesibheke phambili ekubambisaneni okukhulu namakhasimende aphesheya kwezilwandle ngokususelwa ezinzuzweni zombili.